Vaovao - Ahoana no hisafidianana ny akanjon'ny akanjo ivelany?
Mifantoka hatrany amin'ny: kalitao, fahamendrehana, serivisy.
Akanjo zazakely sy zazakely
Ahoana ny fomba hisafidianana ny volon'ny akanjo ivelany?
Misy karazan-damba maro ho an'ny akanjo ivelany. Iza amin'ireo no mety indrindra aminao?
Amin'ny fisafidianana lamba ivelany dia misy enina fiasa tena ilaina. Andao hojerentsika ireo fiasa enina:
Ny haavon'ny hafanan'ny rivotra dia miankina amin'ny fahasarotan'ny fivezivezin'ny rivotra lamba. Ny fitrandrahana ny rivotra dia fiheverana lehibe ho an'ny hetsika ivelany. Anisan'ireny, ny zava-dehibe indrindra dia ny fonony sy ny seza. Ao anaty vala sy fonony voaisy tombo-kase dia mety hiteraka holatra ny lamba mavesatra entin'ny rivotra. Ho an'ny seza, ny ondana mifoka rivotra dia hahazo aina kokoa, tsy hifikitra amin'ny tanana, hahazo aina kokoa amin'ny fahavaratra mafana.
Ny fanoherana ny rano dia miankina indrindra amin'ny hoe hivadika ho rano mitete amin'ny lamba ilay rano. Saingy misy teboka iray, ny fanoherana ny rano sy ny tsy fetezan'ny rivotra dia mifandimby. Amin'ny ankapobeny, ny lamba tsy mahazaka rivotra mahasalama dia mahatohitra rano kokoa, toy ireo izay tsy mety simba, toy ny lamba vita amin'ny visy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny laminasy. Ny tantera-drano dia tena zava-dehibe amin'ny kofehy, akanjo tsy misy rano ary haingon-trano anatiny.
Ny fanoherana amin'ny fitafiana dia manondro ny fahafahan'ny lamba mahazaka fihenjanana amin'ny fihenjanana. Ny lamba ampiasaina amin'ny sambo sy any ivelany dia mazàna mavesatra, mafy ary matetika voaravaka vinyl na resina hafa. Izany dia natao indrindra hanatratrarana endrika sy fahatsapana malefaka kokoa ary hanatsarana ny fanoherana ny akanjo.
Ny fanoherana UV no mety ho antony lehibe indrindra sy tsotra indrindra amin'ny lamba ivelany. Arakaraka ny haavon'ny fanoherana UV no maharitra kokoa ny androm-piainan'ny lamba amin'ny tara-masoandro. Ny lamba maro ho an'ny tara-masoandro dia zava-dehibe kokoa noho ireo ho an'ny alokaloka.
Arakaraka ny maha-avo ny haavon'ny loko amin'ny lamba, no tsy hihena ny lamina. Ny fahaizan'ny loko amin'ny lamba dia miankina amin'ny fahafahany mitazona loko mandritra ny fotoana maharitra amin'ny tara-masoandro, orana ary lanezy. Ny haingam-pandokoana dia singa iray hakantona kokoa. Na izany aza, raha loko mamirapiratra no ampiasaina amin'ny akanjony, rakotra, tsihy, sns. Raha ampiasaina be dia be ny lamba na ahariharin'ny ivelany mandritra ny fotoana lava, ny lamba misy lamina vita pirinty dia mety halazo rehefa mandeha ny fotoana.
Raha ampitahaina amin'ny lamba anatiny, ny fahadiovan'ny lamba ivelany dia toa tsy dia zava-dehibe loatra. Fa ho an'ny lamba ivelany, ny fahadiovana dia hisy fiantraikany amin'ny fiainany fanompoana. Ny fahadiovana, raha ny marina, dia ny manala ny loto ao anaty lamba.
Raha tsy diovina dia hijanona eo amin'ny lamba ny bobongolo ary hitombo hatrany amin'ny loto. Toy ny lamba mihosin-tokana dia tsy madio loatra, noho izany ity karazana lamba ity dia tokony handinika manokana ny sasany.
Eo am-pelatananao izahay isan'andro, amin'ny fotoana rehetra…
Aza misalasala mandefa mailaka aminay na miantso anay
Telefaona: +86 133 6389 0803
Manompo klioba fanatanjahan-tena, fikambanana, oniversite, fivarotana, ivontoerana miantsena, fikambanan'ny governemanta, orinasa ary olon-tsotra sns izahay.
Fanatanterahana baiko OEM & ODM amin'ny marika isan-karazany. Tsy vitan'ny hoe manome serivisy famolavolana sy famokarana izahay fa koa serivisy fakan-kevitra momba ny orinasa.